Mosary… moa sarin’ady? | NewsMada
Tsy fahampian-tsakafo sa mosary na kere ny any atsimo? Tsy any loatra ny olana na adihevitra. Inona ny vahaolana? Na maika io, na maharitra. Mila jerena akaiky izay, tanterahina, tohizana. Tsy fisehoana hoe mijery sy manao zavatra izany, tsy vonjy tavanandro, tsy fialana bala. Fa tena fahatapahan-kevitra, fahasahiana, finiavana, fahavononana: asa haingana sy mivaingana.
Moa sarin’ady sa tena ady no atao amin’ny mosary sy ny haintany? Fanalana fahasahiranana ny mponina any ifotony amin’ny olana miverimberina. Ho hita eo… Tsy maimaina fa nirehitrehitra aloha ny tetikasa, ny lokan’ady hoe tsy maintsy atao, ny fampanantenana amin’ny fitadiavam-bahaolana maharitra, raha ny fivoriana atrikasa tany Ambovombe Androy, ny faran’ny herinandro teo.
Famatsian-drano avy amin’ireo renirano lehibe any an-toerana ho rano madio fisotro, ho an’ny biby fiompy sy ny fambolena… Eo koa ny famoronana asa ho an’ny mponina hiatrehany ny fiainana andavanandro. Tsy latsak’izany ny fanalana ny fitokana-monina amin’ny fanamboaran-dalana toy ny RN 6 sy ny RN 3, ohatra. Takina koa ny fotodrafitrasa maharitra any ifotony amin’izany.
Ny firariana: mba tsy ho fasan’ny tetikasa indray ny faritra atsimo. Moa sarin’ady sa tena ady ny raharaha? Mbola hisy indray ireo dingana samihafa amin’ny fanatanterahana, fa hoe tsy mora ny manao zavatra: fandinihana sy fanapahan’ny filankevitry ny governemanta sy ny filankevitry ny minisitra, fandinihana ara-teknika, fitadiavam-bola… Mba tsy ho fingana ny dingana amin’izany.
Izany rehetra izany, mampangala-dia ny eritreritra hatrany: moa sarin’ady no atao amin’ny mosary sa tena ady? Ny amisavisana ny ratsy, mba hiavian’ny soa sy hahavitana soa. Sao lasa fitaovana politika ny raharaha hoe hatao itsy na iroa, ary efa miroso amin’izany izao. Nefa fampiandrasana kendry tohina akaiky na lavitra. Efa misy ny miomana amin’ny fifidianana, taona 2018, izao.
Atao takalon’aina amin’izany ny vahoaka? Mangetaheta rano sy vahaolana haingana sy mivaingana, mosarena noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fanarenam-piainana maharitra…